မီးကြောက် . . . မီးတောက် မြှောက်မရမ်းလေနှင့် | မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်
← လူမသုံး ဘုန်းမပွင့်
မီးကြောက် . . . မီးတောက် မြှောက်မရမ်းလေနှင့်
ကမ္ဘာနှင့်ချီ်၍ ဖြစ်လေ့ရှိသော ကပ်မီးသည် နီးသထက် နီးလာနေ ချေပြီ။ သံသရာနှင့်ချီ၍ ဖျက်လေ့ရှိ သော အဖျက်မီးသည်လည်း ညီးညီးပင်လောင်နေချေပြီ။ ဘ၀နှင့်ချီ၍ ကူးစက်နေသော အစွဲမီးသည် လည်း ညီးညီးပင် တောက်လောင်နေချေပြီ။ ကပ်မီးကား လောဘ ဒေါသ မောဟ လိုက်စားလွန်းအားကြီး နေခြင်းတည်း၊ အဖျက်မီးကား တဏှာ မာန ဒိဋ္ဌိတို့အကြား မိမိစိတ် ပေါက်လွှတ်ပဲစား ပစ်ထားခြင်းတည်း။ အစွဲမီးကား ဝေဒနာ တဏှာ ဥပါဒါန် တို့အကြား အာရုံလိုက်စားနေခြင်း တည်း။ ထိုမီးများ တကယ်ကြောက် အားပိုပါသည်ဆိုသော်..
မီးကိုဖြစ်စေတတ်သော အာရုံလောင်စာကိုလည်းကောင်း၊ လူကို လောင်စေတတ်သော ကြိုက်၊ မကြိုက်အညစ်တရားများကိုလည်းကောင်း မလိုက်စားမိစေရာ ယောက်ျား၏ သားသမီး ဇနီးအတွက် ၀မ်းစာရှာပေးရသော ဒုက္ခ၊ မိန်းမ၌ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရခြင်း၊ မွေးပေးရခြင်းဒုက်္ခ၊ ထိုအားလုံး ကြိုက်အာရုံ ခင်မင်စွာ လိုက်စားမိကြရာမှ ချည်းပင်။ သည့်အတူလျှင်
အပါယဒုက္ခ၊ ကာမဒုက္ခ၊ ဘ၀ဒုက္ခတို့ကို ပေးဝေတတ်သော ကာမ တဏှာ၊ ဘ၀တဏှာ၊ ၀ိဘ၀တဏှာ များ အားထားနေခြင်းများသည်လည်း ကြိုက်အာရုံခုံမင်စွာလိုက် စားခဲ့ကြရာမှ ချည်းပင်။ အဆိပ်ပါသော အစာကို လျှာအလိုလိုက် ကိုက်မိ နှိုက်မိခြင်းကသာ အဆိပ်စာရှောင်ရှားတတ်ရာသည်။
၂၀၀၂ အောက်တိုဘာလထုတ် သာရဏီယကထာမှ